May 7, 2020 - Alinnpya
ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်သမားတွေ ပြည်တော်ပြန်လို့ မကျွမ်းကျင်တဲ့ ပြည်တွင်းအလုပ်သမားကို အလုပ်ခိုင်းလိုက်ရာမှ သုံးလောင်းပြိုင်
May 7, 2020 AlinnPya Comments Off on ကိုဗစ်ကာလ အလုပ်သမားတွေ ပြည်တော်ပြန်လို့ မကျွမ်းကျင်တဲ့ ပြည်တွင်းအလုပ်သမားကို အလုပ်ခိုင်းလိုက်ရာမှ သုံးလောင်းပြိုင်
ကုန်လှောင်ရုံ ခေါင်းမိုးမှာ အလုပ်လုပ်နေသည့် အမျိုးသမီး သုံးဦး အောက်ပြုတ်ကျသေဆုံး ဒီကနေ့နေ ့လည်ပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို ့နဲ့ကီလို၁၂၀ ဝေးတဲ့ ချွန်ဘူရီခရိုင် စီရာချာ မြို ့မှာ ဆောက်လက်စ ကုန်လှောင်ရုံသစ်အဆောက်အဦး ခေါင်မိုးမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမ အမျိုးသမီး သုံးဦး ဟာ ၁၅မီတာခန့်အမြင့် ခေါင်မိုးကနေ ပြုတ်ကျ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း […]
ဒူဘိုင်းရောက် မြန်မာ ၁ဝဝ ကျော် ပြန်တော်ပြန်မယ်
May 7, 2020 AlinnPya Comments Off on ဒူဘိုင်းရောက် မြန်မာ ၁ဝဝ ကျော် ပြန်တော်ပြန်မယ်
ယူအေအီးနိုင်ငံ၊ ဒူဘိုင်းမြို့က မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက် ၁ဝဝ ကျော်ဟာ အစိုးရစီစဉ်ပေးတဲ့လေယာဉ်နဲ့ လာမယ့်မေလ ၁ဝ ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေပိတ်သွားပြီးနောက် အလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်ပြီး၊ လေကြောင်းလိုင်းတွေလည်းပိတ်ထားတာကြောင့် သူတို့တွေဟာ ၂ လနီးပါး ဒူဘိုင်းမှာပိတ်မိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။RFA ဝိုင်းတော်သား စောဖိုးခွားကတင်ပြထားပါတယ်။ RFA Burmese ဒူဘိုင္းေရာက္ ျမန္မာ ၁ဝဝ ေက်ာ္ ျပန္ေတာ္ျပန္မယ္ ယူေအအီးနိုင္ငံ၊ ဒူဘိုင္းၿမိဳ႕က ျမန္မာနိုင္ငံသားအေယာက္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ဟာ အစိုးရစီစဥ္ေပးတဲ့ေလယာဥ္နဲ႔ လာမယ့္ေမလ ၁ဝ ရက္ေန႔မွာ […]
အာမခံဖြင့်လွတ်လာသော မင်းရာဇာရဲ့ယောက္ခထီး ဦးမောင်မောင်အေးရဲ့ပုံရိပ်များ
May 7, 2020 AlinnPya Comments Off on အာမခံဖြင့်လွတ်လာသော မင်းရာဇာရဲ့ယောက္ခထီး ဦးမောင်မောင်အေးရဲ့ပုံရိပ်များ
အာမခံပေးလိုက်တယ်တဲ့ 😃 သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာရဲ့ယောက္ခထီးဖြစ်သူဦးမောင်မောင်အေးကိုမြောက်ဥက္က လာတရားရုံးမှအာမခံပေးလိုက်၍ပြန်လည်လွတ် မြောက်လာ … အိမ်အကူအမျိုးသမီးကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြင့်တရားစွဲခံထားရတဲ့ မင်းရာဇာရဲ့ ယောက္ခထီးဖြစ်သူကို ယနေ့မြောက်ဥက္ကလာတရားရုံးမှအာမခံဖြင့်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ် … #CG #CeleGabar #PhotoKaungSat အာမခံျဖင့္လြတ္လာေသာ မင္းရာဇာရဲ႕ေယာကၡထီး ဦးေမာင္ေမာင္ေအးရဲ႕ပံုရိပ္မ်ား အာမခံေပးလိုက္တယ္တဲ့ 😃 သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းရာဇာရဲ့ေယာကၡထီးျဖစ္သူဦးေမာင္ေမာင္ေအးကိုေျမာက္ဥကၠ လာတရား႐ုံးမွအာမခံေပးလိုက္၍ျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္လာ … အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးကို ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈျဖင့္တရားစြဲခံထားရတဲ့ မင္းရာဇာရဲ့ ေယာကၡထီးျဖစ္သူကို ယေန႔ေျမာက္ဥကၠလာတရား႐ုံးမွအာမခံျဖင့္ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ပါတယ္ … #CG #CeleGabar #PhotoKaungSat
မင်းရာဇ၏ယောက္ခမဖြစ်သူ ငွေ(၁၀)သိန်းဖြင့် အာမခံရ
May 7, 2020 AlinnPya Comments Off on မင်းရာဇ၏ယောက္ခမဖြစ်သူ ငွေ(၁၀)သိန်းဖြင့် အာမခံရ
အိမ်ဖော်အမျိုးငယ်အား အက်ဆစ်ဖြင့်ပက်ခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာအပါအဝင် လေးဦးကို (မေလ ရ-ရက်)နံနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်က မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်တရားရုံးတွင်ရုံးထုတ် ရီမန် ရယူခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရုံးထုတ်ရမန်ယူရက်တွင် မင်းရာဇာ၏ ယောက္ခမကငွေကျပ် ဆယ်သိန်းဖြင့် အာမခံရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မင်းရန်နောင်(သတင်း/ဓာတ်ပုံ)Pyi Myanmar မင္းရာဇ၏ေယာကၡမျဖစ္သူ ေငြ(၁၀)သိန္းျဖင္႔ အာမခံရ မင္းရာဇာ တို႔ ရီမန္ယူ …မင္းရာဇ၏ေယာကၡမျဖစ္သူ ေငြ(၁၀)သိန္းျဖင္႔ အာမခံရ အိမ္ေဖာ္အမ်ိဳးငယ္အား အက္ဆစ္ျဖင့္ပက္ခဲ့သည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းရာဇာအပါအဝင္ ေလးဦးကို (ေမလ ရ-ရက္)နံနက္ […]
သားအဖချင်း ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီး သမီး ၁၂ နှစ်အရွယ်ကတည်းက ၁၈ နှစ်အရွယ်အထိ။ အခုကိုယ်ဝန် ၂ လ ရှိနေတော့မှ
May 7, 2020 AlinnPya Comments Off on သားအဖချင်း ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီး သမီး ၁၂ နှစ်အရွယ်ကတည်းက ၁၈ နှစ်အရွယ်အထိ။ အခုကိုယ်ဝန် ၂ လ ရှိနေတော့မှ
နေပြည်​​တော်​ လယ်​ဝေးမြို့နယ်​တွင်​ အ​ဖေအရင်​းဖြစ်​သူမှ သမီးအရင်​းဖြစ်​သူအား ၁၂ နှစ်​အရွယ်​မှစပြီး ၁၈ နှစ်​အချိန်​ထိ ကာမ ကျူးလွန်​မှုဖြစ်​ပွားတဲ့ ထူးခြားသတင်​း… နေပြည်တော် ​လယ်ဝေးမြို ့နယ် အေလာနယ်မြေရဲစခန်းအပိုင်​၌ အဖေဖြစ်သူမှ သမီးအရင်းဖြစ်​သူအား အကြိမ်ကြိမ် သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်သဖြင့် တိုင်တန်းမှုတစ်ခုရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်​။ ဖြစ်စဉ်မှာ သမီးဖြစ်သူမ (….) အသက် (၁၈)နှစ် (ဘ) ဦးနန်းဝင်းမှာ ဆီးများကျဉ်နေကြောင်း ပြောပြသဖြင့်ပျဉ်းမနားမြို ့ဆေးခန်းသို့ ့သွားရောက်ပြသခဲ့ရာသမီးဖြစ်သူ (….) တွင် ကိုယ်ဝန် […]
May 7, 2020 AlinnPya Comments Off on မင်းရာဇာတို့အား ရုံးထုတ်
အိမ်အကူအမျိုးသမီးကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရတဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာကိုမြောက်ဥက္ကလာတရားရုံးမှာယနေ့စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းများ … #CG #CeleGabar Photo KaungSat မင္းရာဇာတုိ႔အား ရံုးထုတ္ အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရတဲ့သရုပ္ေဆာင္မင္းရာဇာကိုေျမာက္ဥကၠလာတရားရံုးမွာယေန႕စတင္တရားစြဲဆိုခဲ့တဲ့ ျမင္ကြင္းမ်ား … #CG #CeleGabar Photo KaungSat
မွန်ပြည်နယ်မှ ပိုးတွေ့အတည်ပြုလူနာ Case – 27 ရောဂါပိုးကင်းစင်၍ ဆေးရုံမှဆင်းပြီး
May 7, 2020 AlinnPya Comments Off on မွန်ပြည်နယ်မှ ပိုးတွေ့အတည်ပြုလူနာ Case – 27 ရောဂါပိုးကင်းစင်၍ ဆေးရုံမှဆင်းပြီး
မွန်ပြည်နယ်မှ ပိုးတွေ့အတည်ပြုလူနာ Case – 27 ရောဂါပိုးကင်းစင်၍ ဆေးရုံမှဆင်းပြီး မြန္ျပည္နယ္မွ ပိုးေတြ႔အတည္ျပဳလူနာ Case – 27 ေရာဂါပိုးကင္းစင္၍ ေဆးရုံမွဆင္းျပီး